Tantely Andrianarivo kandida Mikoropaka ny Arema
Nikorapaka ny lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny antoko Arema, tarihin’ny Amiraly Didier Ratsiraka nanoloana ny fanambarana nataon’ny praiminisitra teo aloha Tantely Andrianarivo ny maha kandida azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018.
Re fa nisy mihitsy ny fivoriambe maika natao teny amin’ny tranon’ny filoha teo aloha teny Mangarivotra Faravohitra ny harivan’ny alatsinainy 7 aogositra teo nentina niresahana iny zava-niseho, izay tsy dia nampoizin’ny rehetra iny. Tsy mbola nilaza fa hiala sasatra eo amin’ny fanaovana politika tokoa mantsy ny amiraly Didier Ratsiraka, ary mbola tsy nanondro izay olona mety hisolo na handimby azy na dia efa mandroso fahanterana aza, satria efa 84 taona ny tenany. Raha dinihina tamin’ny fanamarihana ny faha-40 taonan’ny antoko Arema tamin’ny taon-dasa rahateo, dia mbola tsy mihevitra ny hilavo lefona amin’ny politika mihitsy ny Amiraly ary mety mbola te ho kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena. I Tantely Andrinarivo, izay praiminisitra tamin’ny androny, zaza novolavolainy ara-poltika indray koa ity milaza hirotsaka, ka mety hifaninana izany ireo. Midika ihany koa fa miala tsikelikely amin’ny amiraly ireo nafana fo sy tao anatin’ny sambon’ny Arema, toa an’i Pierrot Rajaoanarivelo, Pierre Houlder, Tantely Andrianarivo,
Tamin’ny taona 2001 no efa nikendry ny ho kandida sy nanana tanjona ho filoha i Tantely Andrianarivo, saingy voasakan’ny Amiraly Didier Ratsiraka. Toy izany ihany koa ny taona 2013. Tamin’ity indray mitoraka ity kosa, dia efa naman’ny tongotra mby an-dàkana ny azy, ary voalaza fa isan’ireo kandida atosiky ny sehatra iraisam-pirenena ny tenany. Olona efa niara-niasa tamin’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny Banky Iraisam-pirenena rahateo i Tantely Andrianarivo, ary tsikaritra ho ankasitrahan’ny olon’ny Arema ihany koa. Na izany na tsy izany aza anefa, dia maro ihany koa no manasokajy azy ho mitsipa-doha laka-nitana sy tsy manoa ny olona namolavola azy teo amin’ny politika, ka zary tonga amin’ilay fomba fiteny hoe “boaikely manohatra”. Mampametra-panontaniana hoe vaky ve ny ady eo aminy sy ny Amiraly Ratsiraka na tsy mahatoky ny Arema intsony I Tantely Andrianarivo, ka nisafidy ny hikopak’elatra irery satria efa nahazo antoka tamin’ny mpiara-miombon’antoka aminy? Andrasana izay ho fanehoan-kevitry ny Amiraly Didier Ratsiraka manoloana ny fanambarana nataon’ity praiminisitra fahiny, izay isan’ny andry nianteheran’ny Arema ity.